Macroeconomics | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Chii chinosiyanisa pfungwa ye "zvigadzirwa" kubva mumusoro we "zvinhu zvekugadzira"? Mukunyatsonzwisisa kukuru kwezvinhu (kubva kuFrance. Zvidzidzo zvinobatsira) mari, zvinhu zvinokosha, mashizha, mikana, mitsva yemari, mari. Kazhinji inowedzera ...
Chii chidimbu? Zvose zviri nyore. Muchidimbu (kubva muchidimbu cheChirungu) inyaya yakanyorwa yakanyora yekuyananisira pakati pemushambadziri uye mushambadziri, mune izvo zvigadziriswe zvemashure ekutsvaga kuparidzira zvinorayirwa. Tsamba shoma (German) chimwe chinhu chakafanana ...
Dhora rakaderedzwa zvakadini pamusoro pemakore ekupedzisira e20? Iwe unogona kunyora se peresenti kana kutsanangura zvakasiyana.
Dhora rakaderedzwa zvakadini pamusoro pemakore ekupedzisira e20? Iwe unogona kunyora se peresenti kana kutsanangura zvakasiyana. Kutengesa kwezvinhu hakuna chinhu kana kuchienzaniswa nekudhura. Kunzwisisa kukosha - kuderera kwesimba rekutenga re "green" ...
zvinhu zvikuru zvehupfumi hwakakanganiswa. kunaka kwayo uye kukanganisa ???
zvinhu zvikuru zvehupfumi hwakakanganiswa. kunaka kwayo uye kukanganisa ??? 1-th pamwe chete: Inonyanya kuwedzera yehupfumi hwakakanganiswa ndeyekubatanidzwa kwemarudzi matatu ehurongwa hwehupfumi (tsika, hutsika, misika) 2-th pamwe: Private property in such ...
Chii chinokonzera mari?
Chii chinokonzera mari? Hapana izwi rakadaro. Pane "mari". Kudzorera kubatsirwa kwepanyama nemari. ropafadzo dzinoshandiswa nemari Izwi rokuti mari yakatogadzirirwa shanduro yeshoko. Yakawanikwa pane yaiti http://www.newslab.ru/blog/153095 pano inotsanangurwa: Uye sei ...
Ndine dambudziko. Ini handigoni kunzwisisa chii chiri kuderedza? Ndapota, kana uchikwanisa nemuenzaniso.
Ndine dambudziko. Ini handigoni kunzwisisa chii chiri kuderedza? Ndapota, kana uchikwanisa nemuenzaniso. Sezvo ndichiri kunzwisisa, kuora kwezvinhu zvinhu zvakadai semari mukugadzirwa, imwe yepakati yemari, ...
Economy Batsirai tapota tipei mienzaniso yekusati-yekutengesa zvinhu zvekugovera nekudaira mberi
Economy Ndapota ndibatsirei ndipe mienzaniso yekusina mutengo zvinhu zvekugovera uye kuda kunotangira.Nokutendai.Asiri-mutengo wezvinhu zvekupa nekuda-izvi zvinogona kunge zviitiko zvekukurumidzira kwemamiriro ezvinhu akaoma (rudo, rubatsiro rwevanhu) t ...
Ndeapi satos mune imwe bitcoin?
Ndeapi satos mune imwe bitcoin? Yakanamatira pombi kubva ku1000 kusvika ku3000 satoshi kila 10 maminetsi https://satoshinow.com/?ref=145535 Mafambiro akakanakisisa Satoshi uye mamwe makirokiti ehedpto, nhamba yakawanda yemakanera https://yobit.net/?bonus=EhArY Real tap ...
Batsira, ndapota, sarudza mienzaniso yeimwe nzira, iyo inoshandiswa mune zvezvemari inyanzvi nzira mukati
Batsira, ndapota, tora mimwe miitiro kune dzimwe nzira, kusvika kune-rye nzira mukati meSynthesis inoshandiswa mune zvezvemari. Zvinoshandiswa pamwe chete nekuongorora, i.e., kutanga kwepfungwa yekuparadzanisa kwechinhu chiri pasi pekudzidza mune zvayo chikamu chikamu, ...
Ndezvipi zvitsva? Monopsony ndeyemhando yemakakiti umo mutengi mumwechete wezvigadzirwa, basa, kana zvigadzirisiti. Zvimwe kazhinji - iyo mamiriro ayo iyo kambani ari mutongi mune zvemusika, apo ...
Nyora zvinhu zvekuwana uye kushandiswa kwemari yebhajheji yenyika.
Nyora zvinhu zvekuwana uye kushandiswa kwemari yebhajheji yenyika. Yakapinda yunivhesiti, - ndinonyora kubva mumusoro - maererano neshoko 49 yeBabote Code yeRussian Federation 1, iyo federal bhadharo yemari inosanganisira: - federal ...
Chii chinonzi MICROSREDA Enterprise?
Chii chinonzi MICROSREDA Enterprise? Nzvimbo yenyika yebasa ndiyo mamiriro emukati kana epfupi, zvikonzero uye mikana yebasa rinosarudza basa rayo. Izvo zvikonzero zvikuru zveMP P. ndezve-sangano rehurongwa hwebasa; vatengesi; vanyori; clientele; competitors; ...
Mari inogovera uye mari yakawanda. Fisher Formula
Mari inogovera uye mari yakawanda. Fisher's formula Equation inorondedzera kuenzanisa pakati pehuwandu hwemari inopararira uye nekukurumidza kwekupararira kwavo, kune rumwe rutivi, uye mutengo wekutengesa uye yehuwandu hwekutengesa - ...
Ndiani anoita mari pa Forex? ? Ichokwadi here?
Ndiani anoita mari pa Forex? ? Ichokwadi here? Izvi ndezvechokwadi, kunyange zvazvo pane zviri nani pane zvebhizimusi zvingasarudzwa. Nyora. Pamusoro pekudzidzira maakaunti iwe uchakwevera nechitsinho chako chekuruboshwe pachikero chekuona kwako - ...
Ndeipi nzvimbo yeRussia munyika mune mafuta uye gas inochengetedza uye kugadzirwa?
Ndeipi nzvimbo yeRussia munyika mune mafuta uye gas inochengetedza uye kugadzirwa? Maererano nehurumende yeRussia, maRussia ane zvinopfuura 10% yemafuta epasi rese, anotsigira 2 munyika yose ne ...
Chii chagadziriswa? Musangano wekugadzwa kwekutora hurumende semukuru wehurumende. Shamwari yake pahutongi hwehurumende yehurumende ndiyo kuratidzika. Kuvhurwa rudzi rwechiratidzo chemamiriro ezvinhu, yakagadzirirwa kusimbisa kukosha uye kutarisirwa kwehofisi yepamusoro yevanhu.
Ndapota, nyora uye unonditsanangurire maitiro ekuverenga mutengo wekutengi uye GDP deflator. Zviri nani pakuwedzerwa mafomu
Ndapota nyorera uye unonditsanangurire maitiro ekuverenga mutengo wemari yevatengi uye GDP deflator. Zviri nani muhuwandu hwahwo huwedzerwa, mutengo wemutengo wevatengi unoratidza kuchinja kwemazinga emutengo we "basket" yezvigadzirwa nemabasa zvinowanzoshandiswa ...
Chii chiri COKE COAL uye chii ichocho?
Chii chiri COKE COAL uye chii ichocho? Mazi anoreva nzira dzesimba, uye zvose izvo simba zvinopa kugoverwa kwezvinhu zve nyika imwe neimwe. Zvingave kutengeswa kana kutengesa .. Coke - ...
kushandiswa kwenyika yose uye kuparadzanisa chii chiri musiyano?
kushandiswa kwenyika yose uye kuparadzanisa chii chiri musiyano? Kushandiswa kwepamutemo uye kuparadzaniswa kwezvinhu zvakakosha mumamiriro ekufambisa kwehupfumi hwepasi rose. Kune dudziro dzakasiyana-siyana dzezwi rokuti "internationalalization". Internationalization inzira yekuwedzera kubatanidzwa mune zvepasi rose.
Ndezvipi zvakabatana zvemari М1, М2, М3
Ndezvipi zvingabhadhara mari MHINUMX, М1, М2. Fomu kubva pane inowanika data mari yezvemari МХNUMX, М3, М1. Dhiyosi panhoroondo dziripo mubhangi XNUMHed. 2 inoongorora zviyero Metal mari XNUMHed. Small ...
Mibvunzo ye81 mu database yakagadzirwa mu 0,753 masekondi.